Ajụjụ - Weifang Hualand Machinery Co., Ltd
Gịnị mere m ga-azụrụ ihe n'aka Huamachinery ụlọ ọrụ?
N'ihi na anyị na ihe karịrị nnọọ a factory. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ime ka n'aka na ọ bụla ahịa bụ 100% afọ ojuju na ha zuo na ịzụ ahịa ahụmahụ. Ọ bụrụ na ị na-adịghị afọ ojuju kpamkpam, anyị ga-aza gị nsogbu n'obi ozugbo.
Gịnị ma ọ bụrụ na e nwere nsogbu na m item?
Anyị nwere otu afọ akwụkwọ ikike, Free akụkụ ndochi ruru quality nsogbu anyị na-na na na-enwe obi ụtọ na-anabata alaghachi nke ihe na ọnọdụ ọhụrụ. Anyị akwụkwọ ikike na-emetụta nke mbụ purchaser nke igwe.
Olee otú ịtụ?
Mgbe ị na-ekpebi ịzụta, anyị ga-ezitere gị akwụkwọ ọnụahịa profoma na anyị akụ ọmụma, mee ka nke a PI na akụ, ma na-arịọ na-eme ka T / T maka nkwụnye ego. N'ihi na otu set, akụrụngwa gị nwere ike napụta n'ime 5 ụbọchị mgbe anyị na-ego, na anyị ga-eziga ndị na mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri na-anapụta gị site na oké osimiri.
-In ikpe n'ihi ihe njikwa ebubo, ị nwere ike nyefee 100% nke ugwo, anyị pụrụ ime ndokwa ngwaahịa na mbupu n'okpuru òkè gị
-ọ bụrụ na ị ka na-adịghị aghọta, biko, unu hestitate jụọ m
Enwere m ike ịtụ 1 set maka sample?
Yes.Sample anabata, Ị nwere ike nwalee àgwà nke sample.